NamasteNEPALI.com: ४ वर्षे बालकलाई जन्मकैद, एक वर्षको नहुँदै हत्या, लुटपाट तथा धम्कीको अपराध !
४ वर्षे बालकलाई जन्मकैद, एक वर्षको नहुँदै हत्या, लुटपाट तथा धम्कीको अपराध !
फागुन २७, इजिप्ट । यहाँको एक अदालतले ४ वर्षका बालकलाई जन्मकैदको सजायँ सुनाएको छ । ती बालक एक वर्षको छँदा उनले गरेको हत्याको अभियोगमा उनलाई अदालतले दोषी ठहर गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतले आफु विरुद्ध आजिवस काराबासको सजायँ सुनाइरहँदा अहमद मन्सुल कर्मी नामका ती बालक अदालतमा उपस्थित थिएनन् । उनीमाथि ४ जनाको हत्या, ८ जनाको ज्यानमार्ने उद्योग, एक ठाउँमा सम्पत्ति लुटपाट तथा क्षतिका साथै पुलिस तथा सेनाका अधिकारीलाई धम्क्याएको अभियोग पनि लागेको छ । यी सबै अभियोग उनले एक वर्षको उमेरभित्रै गरेका थिए ।
सन् २०१४ को सुरुमा भएका घटनामा जन्मकैद सुुनाइएका ११५ जनामा अहमद पनि एक हुन् । उनीहरुलाई पश्चिम कायरोस्थित एक अदालतले यस्तो सजाय सुनाएको छ ।
ती बालकका वकिल फैसल अल सायदका अनुसार अहमदको नाम अपराधीको सूचिमा गल्तीले पर्न गएको भएपनि अदालतमा आफुले पेश गरेको उनको जन्मदर्ता प्रमाण अदालतले न्यायाधीश सामु पेश नगरेको आरोप लगाएका छन् । ती बालकको जन्म सन् २०१२ को सेप्टेम्बरमा भएको हो ।
वकिलहरुले ४ वर्षे बालकमाथि एक वर्षको उमेरमै हत्या, लुटपाट, ज्यानमार्ने उद्योग तथा धम्की जस्ता अपराध गरेको भन्दै दोषी ठहर गरी अदालतले सजायँ सुनाउनुले इजिप्टमा न्याय नभएको प्रष्टाएको बताएका छन् ।
Labels: MAIN, NEWS, PITIFUL, WORLD